Iyo Inokurumidza uye Yakashongedzwa KDE mune yakavhurikaSUSE 13.2 Harlequin - SMB Networks | Kubva kuLinux
Iyo Inokurumidza uye Yakashongedzwa KDE mune yakavhurikaSUSE 13.2 Harlequin - SMB Networks
phico | | Networks / Maseva
Chinangwa chikuru cheichi positi ndechekuratidza maitiro atingaite Desktop - Desktop base ine mashoma ekutanga kumisikidzwa, nekuti isu tatova ne DNS - DHCP pane network, uye isu hatidi kuitisa nemaoko network network.
Takasarudza kugadzira desktop neiyo vhezheni kuvhuraSUSE 13.2 Harlequin, uye kwete kumirira zvakare kuzadzikiswa kweiyo yekuisa DVD uye vhezheni yekuchengetedza 42.2 Kusvetuka. Zvinoenderana nezvakandiudza shamwari yangu uye wandinoshanda naye, Ing. Eduardo Noel NúñezMaitiro ekumisikidza haana kusiyana zvakanyanya pakati peshanduro kunyangwe kusvetuka kwenhamba kunozvizivisa.
1 Nhanho-nhanho kumisikidza kuburikidza nemifananidzo
1.1 Kuisa rutsigiro
1.2 Kuisirwa, kuziviswa kwenzvimbo dzekuchengetedza uye system kugadzirisa
2 Mamwe marongero ekutanga
Isu takatora zviyero makumi mashanu nezvishanu kuratidza danho nedanho sekutendeka sezvinobvira. Mune yega yega yekumisikidza skrini, vhura Zvinoita kuti basa redu rive nyore nekuvapo kwebhatani bhatani batsira kazhinji inowanikwa muzasi kuruboshwe.
Iwe uchaona yakawanda mifananidzo yakafanana neiyo yakatorwa mu yapfuura post, asi zvakafanira kuvaratidza zvizere muiyi, zvekuti hazvidi kuti ubve pane peji rewebhu kuenda kune rimwe. Aya ndiwo maitiro atinoita kuverenga kuve nyore.
Sekuisa svikiro tinoshandisa iyo DVD mufananidzo kuvhuraSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso. Kana iyo michina isina DVD inoridza, kana kana zviri nyore kwatiri kushandisa ndangariro - pen drive, tinogona kuzviita sezvakaratidzwa muchinyorwa Memory neye autostart yekuisa Debian, CentOS, kana kuvhuraSUSE. Mushure mekuisa iyo inoshanda sisitimu, kugadzirira ndangariro iwe yaunogona kuisa uye kushandisa chirongwa Munyori wemifananidzo naSUSE Studio.
Tinokurudzira yemuchina chaiwo openuse-desktop.fromlinux.fan anenge 768 megabyte e RAM uye 20 - 80 GiB hard drive, zvinoenderana nekuti ichashandiswa sei uye kana iwe uchida kuyedza kutamba multimedia mafaera pairi.
Isu tinobvuma nekutadza iyo Kuparadzanisa Chirevo inopihwa nechirongwa chekumisikidza, sechiratidzo chekuvimba mune ruzivo rwekuvhuraSUSE mune izvi zvinhu.
Kana usiri kuzoedza kutanga mumushini chaiwo uye wafunga kuzviita zvakananga paDesktop yako, Kuchengetedza kukuru kwete kurasikirwa iyo iripo data pane ako akaomarara madhiraivha. Kuchengetedza kukuru neiyo File System - File System zvakasarudzwa. Kuchengetedza kukuru nekusa shandura iyo File System ye partition ine data, uye kwete kuimisa.
Kunyangwe isu tichiratidza zvinokwanisika desktops kusarudza, pakupedzisira isu tinosarudza iyo KDE. Tinotenda kuti kushandisa desktop isiri iyo KDE mune vhuraSUSE Desktop, zvese kusaremekedza VhuraSUSE Chikwata. 😉 Zvisinei, inzwa wakasununguka kusarudza iyo yaunofarira uye woedza.
Zita remushandisi akasarudzwa «Buzz»Ndezvekukudza Debian, chatinofarira kugovera. Asi hapana. 😉
Tora nguva yako kusarudza software yekuisa. Iyo yakanakisa Package Manager yakakodzera kufamba, sezvakaratidzwa mu mifananidzo 13, 14, 15 uye 16.
Mifananidzo 24, 25 uye 26: Mushure mekuisa iyo inoshanda sisitimu kubva kuDVD kana imwe midhiya, chinhu chekutanga kuita kushandura zita remakomputa uye zita renzvimbo pazvinenge zvichidikanwa. Iri zita rezita harinyanye kukosha sezvo rakaiswa kuburikidza neLAN's DHCP server. Isu tinoita izvi zvakajeka kudzivirira zvikanganiso.
Mifananidzo 27, 28, 29, 30, 31 uye 33: Chirevo chematura ekuvandudza maitiro edu, angave emuno kana paInternet. Sezvatakaita muchinyorwa yapfuura Isu tinodzima akasiyana mafosheni anovhuraSUSE pane avo maseva paInternet, uye isu tinowedzera edu ari eMunharaunda. Sezvinei, isu tinoenderera pamwe neakafanana marekodhi. Database, Packman, Updates, Oss y Asiri-Oss, Kuti tiite tafura ine mutemo wese. Vanotiregerera kana pasuru diki ikashaikwa iyo inofanirwa kutsvaga uye kuwanikwa paInternet. 😉
Mifananidzo 35, 36 uye 37: Inotanga uye inopedza iyo yekuvandudza yePakeji Maneja weiyo YaST. Pachiratidziro chekutanga tinosiya zvakasarudzika sarudzo. Isu takangobaya bhatani Shandisa.
Mifananidzo 38, 39, 40, 41, 42 uye 43: Mushure mePakeji Maneja kuzvimisikidza pachayo, inovhura iyo skrini nemapakeji kubva kune yakasara sisitimu kuti ivandudzwe. Mariri, isu tinogamuchirawo zvisarudzika zvisarudzo.
Pasina mufananidzo: Hatina kutora masikirini eiyo nzira yekutangazve iyo sisitimu iyo inofanirwa kuitwa inotevera, uye maitiro ekupinda, tichifunga kuti vanozivikanwa kune vadikani veKDE. Nekudaro, kana iwe uchida kuona iyo yekupinda mufananidzo, ndapota farira iyo 21 image. 😉
Mamwe marongero ekutanga
Mifananidzo 44, 45 uye 46: Isu tinozivisa mu Firewall - firewall kuti iyo network interface eth0 imi muri vaJehovha Nzvimbo Yemukati kana kune iyo LAN yeSMA yedu.
Mifananidzo 47 ne48: Isu takaongorora nekuisa zvimwe zvigadzirwa zvinovhurwaSUSE. Haisi danho rinosungirwa, asi zvinokurudzirwa.
Mifananidzo 49 ne50: Mashoma kushanya kweanozivikanwa KDE desktop nharaunda Sisitimu Zvamada.
51 mufananidzo: Wedzera kana kubvisa zvirongwa uchishandisa iyo YaST module.
Isu takamirira iwe mune inotevera mutambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Networks / Maseva » Iyo Inokurumidza uye Yakashongedzwa KDE mune yakavhurikaSUSE 13.2 Harlequin - SMB Networks
Kwakanaka Post…. Makorokoto
Ini ndakabvisa openuse kubva pakombuta desktop, nekuti pakupedzisira yakaguma neiyo system partition izere uye ini handina kukwanisa kuichenesa, pakupedzisira ndakapedzisira ndaisa kde neon uye yakanaka nekuti ne kde neon inongobata 9G nezvose zvakaiswa. Mune iyo laptop ini ndine manjaro kde, inoshandawo chaizvo uye unogona kuchenesa system senge kde neon.
Pindura kuna carlidov
Ini ndinoombera zvinyorwa zvisiri zveDebian, Arch, kana Ubuntu.
Uyezve, ini ndanyora mahara software zvinyorwa zvemaforamu eUruguay kana mablog, uye ini ndaigara ndichivatumira se "YeLinux", kwete yeFedora, kunova iko kugovera kwandinogara ndichishandisa ndisati ndashandisa Mac. Inounza mukana werusununguko mune "yakasununguka" software iyo vazhinji vanozivisa, nekuti kune vanhu vasina ruzivo rwakawanda zvinoreva kuti software iyi inoshanda chete muUbuntu semuenzaniso, uye kana iye ane OpenSUSE asina zano rakawanda iwe vari kumagumo kufa.
Alejandro TorMar: Ndatenda zvikuru nekupindura uye nekuongorora kwako chinyorwa. Ini ndinokukoka iwe kuti uenderere mberi nesu iyo PYMES akateedzana.
Carlidov: Ini ndakaisa BleachBit zvese mu dns.fromlinux.fan, pamwe neiyo openuse-desktop.fromlinux.fan, uye mune ese ari maviri nzvimbo yakachenesa partition (s) uko iyo sisitimu yekushandisa yakaiswa neanopfuura 180 megabytes. Sarudzo yandakasarudza yaive "BleachBit seManeja". Iyo inomiririra dns.fromlinux.fan ndiyo yandaisa mukati:
Gonzalo Martínez: Ndinokutendai zvikuru nekutaura kwenyu kwechokwadi. Mune chinyorwa:
Isu tinotsanangura kuti sei takasarudza iyo Debian, CentOS, uye openSUSE distros yeiyo SMB nhepfenyuro yezvinyorwa. Debian ndeyeUniversal, nepo CentOS - Red Hat, uye yakavhurikaSUSE - SUSE vane bhizinesi-rinotungamira distros mumaonero evazhinji mabloggi, uye avo vega vanochengeta uye vanotsigira vane simba. Takanyora zvinyorwa zviviri nezve maviri ekupedzisira distros, nenzira yekuratidzira, uye ndinokukoka kuti uverenge, kana usati watove. Izvi ndeizvi:
Kana isu tichinyora nezveDebian, tinonyora nezve baba vemhuri huru uye nezve .deb mapakeji. Patinozviita paCentOS - Red Hat, chinhu chimwe chete chinoitika, asi ne .rpm mapakeji.
Kusarudzwa kwemastros kwakange kusiri kwemafaro. Yakanga yakavakirwa pakufunga kwepfungwa. Ini pachangu handigone kufukidza zvimwe zvekugovera kunyora nezve netiweki masevhisi muSMB netiweki, nekuti ini ndinofunga ndaizopenga. 😉
Kune rangu divi, ini ndinokukoka iwe kuti unyore, kune iro rino bhurogu DesdeLinux, nezve ma distros atisingatarise nawo, nekuti iwe uchiratidza kuti wakazviita pazviitiko zvakapfuura. Ndinovimba kuti Luigys Toro, maneja wedu, anofunga nenzira imwecheteyo.
Ndinoda kukwanisa kupa, kunyangwe makore maviri apfuura ndakachinja kuenda kuMac uye ndoshandisa OS X kazhinji, ndichiri kuishandisa kubasa (zvese basa rangu uye neVPS yakati wandei nemamwe mapurojekiti eangu).
KubvaLinux iri hwindo rakavhurika kune chero munhu anoda kupa ruzivo rwavo mukufunda kwenharaunda. Chiitiko chakaunganidzwa chevanyori ndicho chinobvumidza mazhinji ma novices uye nyanzvi munzvimbo dzakasiyana kuti vabudirire uye nekuita mabasa ane hukama neLinux
Maitiro ekuisa Vesta Control Panel mumaminitsi
Ipa kumeso nyowani kuUbuntu Software Center ine Arc Rima theme